Isifundo sevidiyo esilula se-Buttercream + - Frosting Futhi Icing
I-Buttercream Easy Frosting
Ngiyayithanda i-buttercream frosting elula (ngokweqile i-sweet meringue buttercream) ngoba awudingi ukufudumeza noma imaphi amaqanda amhlophe (ngenxa yamaqanda angenisiwe), iyanambitheka kakhulu futhi ayinoshukela kakhulu futhi kuthatha imizuzu eyi-10 ukwenza! Ungangena ngepayipi ngalokhu, ukusebenzise ngaphansi kwe-fondant futhi kunambitheka KAKHULU kangcono kakhulu kunokuthengwe esitolo! Ngiyathembisa noma ngubani angakwenza lokhu!
Le frosting ye-buttercream yiyona iresiphi engifisa ukuba nayo lapho ngenza amaqebelengwane omshado ama-5 ngempelasonto. Manje ukuphela kwamaqhwa e-buttercream engiwasebenzisayo futhi amaklayenti ami ayayithanda. Kungcono kakhulu kuneqhwa elimnandi engangijwayele ukulibona kumaqebelengwane.
IZILUNGISELELO EZILULA ZE-BUTTERCREAM
Ungahle ube njengamaqanda amhlophe… eqhweni? Ini? Kwaze kwaba yilapho ngiya esikoleni samakhekhe ngo-2010 lapho engaqala khona ukuzwa ngezinhlobo ezahlukene zebhotela. Izinhlobo eziningi ze-buttercream, njengeSwitzerland, i-Italian, neFrance zinamaqanda kuzo. Iqanda livame ukushaywa libe meringue elikhanyayo futhi elintofontofo bese ibhotela elithambile lifakwa ngaphakathi. Lapho usebenzisa i-meringue njengesisekelo sakho se-buttercream, akudingeki usebenzise ushukela omningi oholela ekukhanyeni okukhanyayo, okuluhlaza, nokuncane okumnandi lokho kunambitheka kakhulu njenge-ayisikhilimu. YUM!
I-buttercream elula ifana neSwitzerland Meringue Buttercream ngaphandle kokuthi awudingi ukushisa amaqanda abamhlophe noshukela, isiswebhu ku-meringue, ake kuphole, njll. Ngenxa yabamhlophe bamaqanda abancishisiwe, ungeqa esigabeni sokubhaxabula futhi asikho isidingo sokuxubana i-meringue! Ukunambitheka nokuthungwa kwe-buttercream elula kucishe kufane ne-SMBC yendabuko. Ngishilo ukuthi lokhu bekulula?
is wreck it ralph umdlalo wangempela
YINI OKUPHAKATHI KWAMAKHOSI AMAQANDA?
Ngokuya ngezwe okulo, ungahle noma ungabi nakho ukufinyelela kwabamhlophe bamaqanda abancishisiwe. Ezindaweni eziningi, zitholakala ebhokisini esigabeni samaqanda. Igama elithi 'pasteurized' lizoba ebhokisini endaweni ethile, imvamisa lincane kakhulu.
Ukunamathisela inqubo yokufudumeza kahle ukubulala izifo ezizalwe ukudla nokwenza umkhiqizo uphephe ukuphuzwa noma ukudliwa. Izinto eziningi zinanyisiwe, njengejusi lewolintshi, ubisi newayini. Amaqanda abamhlophe abenziwe kahle aphephile ukuthi angadliwa yinoma ngubani.
Uma ungeke ukwazi ukuthola abamhlophe bamaqanda abancishisiwe ungakwenza unamathisele wena ngokwakho bese usebenzisa abamhlophe beqanda noma ungasebenzisa eyami I-Swiss Meringue Buttercream iresiphi esikhundleni salokho.
ISINYATHELO SE-BUTTERCREAM ESILULA
Isinyathelo 1 - Faka abamhlophe bamaqanda noshukela oluyimpuphu endishini yokuxuba isitendi. Namathisela i-whisk bese uhlanganisa izithako phansi, bese ushaya phezulu imizuzu engu-1-2 ukuze uncibilikise ushukela oluyimpuphu. Awudingi ukushaya i-meringue.
I-Pro-tip - Ku-SMBC yendabuko, kuphekwa ndawonye amaqanda amhlophe noshukela ohlanganisiwe ukuqeda ushukela bese upheka amaqanda. Seqa lesi sinyathelo ngokusebenzisa abamhlophe bamaqanda abancishisiwe noshukela oluyimpuphu.
Isinyathelo 2 - Faka okukhishwa kukasawoti ne-vanilla yakho. Futhi ungafaka okunye ukunambitheka kokukhipha okuthandayo, ngithanda ukukhishwa kukalamula noma okusawolintshi. Sebenzisa okucacile kwe-vanilla okukhipha i-buttercream eqediwe mhlophe.
Isinyathelo 3 - Faka ibhotela lakho elithambile ezihlangwini kanye nesiswebhu ngokunamathisela kwe-whisk phezulu. Uma usebenzisa amaqanda amhlophe angenisiwe asesiqandisini ungahle ubone lomgqa webhotela ebandayo. Lokhu kujwayelekile futhi kungalungiswa kalula.
Misa kalula umxube wakho bese ususa cishe inkomishi elingu-1/3 le-buttercream. Ncibilikisa lokhu ku-microwave cishe imizuzwana engama-20 noma ize incibilike kancane. Awufuni kushise!
Thela le ngxube kubhasikidi wakho oshayayo futhi imfudumalo evela ku-buttercream encibilikile izobangela ukuthi konke kuhlangane futhi kukhilimu. Lokhu kulula ngokuthembeka kunokukhipha abamhlophe bamaqanda ngaphambi kwesikhathi nokuzama ukuletha ekamelweni lokushisa (okungenani kimi).
Isinyathelo 4 - Manje ake isiswebhu se-buttercream size sibe mhlophe futhi sibe fluffy. Lokhu kuzothatha imizuzu engu-8-10 nge-KitchenAid, kepha nambitha ukubona ukuthi sekuphelile. Lapho ingasenambitheki njengebhotela futhi isinoshukela njengo-ayisikhilimu, sekuphelile!
I-Pro-tip - Uma ufuna ukuthi i-buttercream yakho ibushelelezi, phinda iresiphi kabili ukuze ileveli ye-buttercream ibe ngaphezu kwesinamathiselo se-whisk. Njengoba i-buttercream whips, isebenza wonke amabhamuza ukuze uthole i-buttercream ebushelelezi engenawo amagwebu.
Isinyathelo 5 - (Ngokuzithandela) Ukwenza i-buttercream yakho ibe mhlophe ngokwengeziwe, sebenzisa ukuphela komuthi wokuxubha ukufaka kwi-TINY drop of umbala wokudla onsomi futhi cishe i-1 TBSP yokufaka umbala omhlophe wokudla. Okububende kuzolwisana nokuphuzi okubhoteleni kukwenze kube mhlophe kakhulu. Hlanganisa ndawonye.
Usebenzisa ikhwalithi enhle, ibhotela langempela lihamba phambili, kepha ungalifaka i-margarine, ibhotela ye-vegan, noma ukunciphisa imifino. Angikwazi ukuqinisekisa ukuthi ukunambitheka kuzofana, kepha ungasebenzisa noma yini oyithandayo!
owayedlala umbusi ngokubuyisela i-jedi
KUNGANI IBHUTTERCREAM YAMI IQHAKAZEKA?
I-buttercream iyahlukana ngoba ibanda kakhulu. Khipha inkomishi engu-1/3 ye-buttercream uyincibilikise ku-microwave ize incibilike bese uyibuyisela emuva. Leyo bhotela elincane elifudumele lisiza ukuthi liphinde lihlangane futhi.
I-BUTTERCREAM YAMI ITHOBEKE KAKHULU, YINI ENGINGAYENZA?
I-Buttercream ithambile noma iqinile ngokuya ngokuthi ifudumele kangakanani. Uma ithambe kakhulu, kungaba ibhotela lakho ebelithambile kakhulu uma ulifaka noma umhlanganisi ulifudumeza. Faka i-buttercream efrijini imizuzu engama-20 bese uyishaya futhi futhi kufanele iqinise.
KUNGANI UKUPHILA KWAMI KAKHULU KWEBHUTLECREAM?
Abanye abantu bathe i-buttercream yabo inokufana okufana ne-grainy, kepha angikaze ngibone lokhu ngaphambili. Uma unale nkinga, zama ukuhlunga ushukela wakho oyimpuphu ngaphambi kokungeza abamhlophe beqanda abancishisiwe bese uxuba abamhlophe beqanda noshukela oluyimpuphu phakathi nendawo imizuzu emihlanu ukuze uncibilikise ushukela oluyimpuphu.
INGABE LOKHU KUHLE UKUSETSHENZISWA NGAPHANSI KOMDLALI?
YEBO! Ngenza ngaso sonke isikhathi, vele uqiniseke ukuthi upholisa amakhekhe akho kuze kube yilapho i-buttercream iqinile lapho uthinta ngaphambi kokufaka i-fondant. Kuhamba kahle nge okuzenzela marshmallow fondant futhi! Bheka ividiyo yami ku ungayimboza kanjani ikhekhe ku-fondant .
LUQHUBEKE KANGAKANANI LOKHU OKUQHUBEKAYO?
Lokhu kubanda ngeke kuqhume, kepha kuzinzile ngokwanele ukuthi kungashaywa izimbali zebhotela futhi izohlala ekamelweni lokushisa izinsuku ezimbili. Kulungile emazingeni okushisa aze afike kuma-85ºF kepha ayoncibilika elangeni ngqo cishe imizuzu engama-20 ngakho-ke kugcine emthunzini! Ungashintsha uhhafu webhotela ngokuwufinyeza ukuze uzinze emazingeni aphezulu okushisa.
I-buttercream elula ayizinzile njengoba WaseMelika noma I-buttercream yase-Italy kepha izinze kakhulu kunokhilimu ushizi noma ukhilimu ophehliwe.
Ungenza futhi ifayela le- isithwathwa esimhlophe soshukela omhlophe ngokungeza ushokoledi omhlophe ocibilikile ku-frosting ye-buttercream. Lokhu kwenza i-SUPER buttercream eqinile eqandayo eyinhlanganisela ye-buttercream ne-white chocolate ganache.
LE BUTTERCREAM YAHLALE ISIKHATHI esingakanani?
I-buttercream elula izohlala izinsuku ezimbili ekamelweni lokushisa, amasonto ama-2 efrijini noma izinyanga eziyisithupha efrijini. Uma i-buttercream yakho ibanda, qiniseka ukuyishaya futhi ngaphambi kokuyisebenzisa. Letha i-buttercream yakho ekamelweni lokushisa bese uqala ukuyishaya. Bese ususa inkomishi engu-1/3 ye-buttercream bese uyifaka ku-microwave ize ize incibilike, bese uyithululela emuva ngenkathi uyishaya ukuze iphinde ibe bushelelezi futhi.
Uma uzokhipha ikhekhe lakho kusasa, vele ushiye i-buttercream esitheni. Awudingi ukuyifaka esiqandisini kungakapheli izinsuku ezimbili ngoba ibhotela noshukela kusebenza njengokulondolozwa kwayo.
Uma ngabe i-buttercream frosting yakho ihleli ekamelweni lokushisa isikhathi esingaphezu kosuku, ixube nesinamathiselo se-paddle ngaphambi kokuyisebenzisa ukuze ubushelelezi futhi. I-Buttercream ivame ukuthola isiponji ngemuva kwamahora angama-24 futhi ilahlekelwe ukuthungwa kwayo okukhilimu.
INDLELA YOKWENZA UMBALA OBHODLULA KALULA
Ungangeza amaconsi ambalwa wokufaka umbala wokudla kwe-gel kule buttercream ukuyifaka umbala. Iphatha umbala kahle futhi iba mnyama ngobusuku obubodwa. Vele uqiniseke ukuthi ungangezi umbala wokudla omningi noma uzokwazi ukukunambitha.
Uma ufuna ukwenza imibala emnyama, hlola my neon buttercream okuthunyelwe kwebhulogi ukuthola eminye imininingwane.
INGABE AMAQANDA AKUPHASISIWE ABAMhlophe BAPHEPHILE UKUDLA?
Yebo! Amaqanda amhlophe asetshenzisiwe aphathwa ukushisa (njengobisi) ngakho-ke aphephile ukudliwa. Imvamisa ziza ebhokisini lebhokisi elikuyiqanda.Uma ungenabo abelungu beqanda abancishisiwe ungasebenzisa i-my I-SMBC iresiphi esikhundleni salokho. Qaphela: abamhlophe beqanda abaphekiwe abanconyelwa abesifazane abakhulelwe ukuba babe sohlangothini oluphephile.
Ngingangeza okuningi noma ishukela elingaphansi?
Le recipe ayimnandi kakhulu, ikakhulukazi uma ujwayele i-buttercream yaseMelika. Ungangeza ushukela oluyimpuphu uma ufuna ukuthi ubemnandi, kepha awukwazi ukwehlisa ushukela noma i-buttercream izothamba kakhulu.
NGIDINGA UKUHOSHELA KANGAKANANI?
Le iresiphi elula ye-buttercream frosting yenza cishe izinkomishi eziyi-6 ezanele ukuqhwa futhi zigcwalise ikhekhe eliyindilinga ezintathu, ama-8 ound round. Ungasebenzisa umshini wokubala we-frosting ne-cake batter ngezansi ukuze ulungise inani lokubanda ozolidinga kuye ngekhekhe lesayizi ofuna ukukwenza.
Izindlela zokupheka ezihlobene:
Uzenza kanjani izimbali ze-buttercream
Sula isithwathwa (ukunambitheka okufanayo ku-buttercream elula kepha awekho amaqanda)
I-Swiss Meringue Buttercream
I-Buttercream elula ye-Chocolate
Iresiphi emnandi, ecebile futhi elula yokuqandula i-buttercream engenziwa yinoma ngubani. Lokhu akuyona i-buttercream eqhekezayo. Isuselwe emeringue ngakho-ke inokukhanya okuncane futhi kubanda kamnandi efrijini. Kuthatha imizuzu eyi-10 ukwenza futhi kungubufakazi besiwula! Ukukhanya, okuluhlaza hhayi okumnandi kakhulu.
Isikhathi sokulungiselela:5 amaminithi isikhathi sokuxuba:amashumi amabili amaminithi Isikhathi esiphelele:10 amaminithi Amakholori:849kcal
▢24 oz (680 g) ibhotela elingenawo usawoti lokushisa ekamelweni. Ungasebenzisa ibhotela elinosawoti kepha lizothinta ukunambitheka futhi udinga ukushiya usawoti owengeziwe
▢24 oz (680 g) ushukela oluyimpuphu kuhlungwe uma kungenjalo kusuka esikhwameni
▢ezimbili tsp i-vanilla
▢1/2 tsp usawoti
▢6 oz (170 g) amaqanda abamhlophe abancishisiwe lokushisa ekamelweni
▢1 I-TINY drop (1 I-TINY drop) umbala wokudla onsomi (uma uthanda) isithwathwa esimhlophe
Beka abamhlophe bamaqanda noshukela oluyimpuphu esitsheni sokuxuba esima. Namathisela i-whisk bese uhlanganisa izithako phansi bese ushaya phezulu ngomzuzu owodwa ukuqeda ushukela oluyimpuphu
Faka okukhishwa kukasawoti ne-vanilla
Faka ibhotela lakho kwizigaxa bese ushaya ngesinamathiseli se-whisk ukuhlanganisa. Izobukeka igoqekile ekuqaleni. Lokhu kuvamile. Kuzobukeka futhi kuphuzi kahle. Qhubeka ubhaxabule.
Uma i-buttercream yakho ibukeka ijijekile, susa cishe i-1/3 inkomishi ye-buttercream bese uyincibilikisa ku-microwave amasekhondi ayi-10-15 kuze kube yilapho IVELE incibilika. Phindisela futhi ku-buttercream eshaywayo ukuze uyihlanganise yonke.
(Ngokuzithandela) Faka ithonsi lakho lokufaka umbala onsomi wokudla. Shaya phezulu ngokunamathiselwe kwe-whisk imizuzu eyi-8-10 kuze kube mhlophe kakhulu, kukhanya futhi kuyacwebezela. Nambitha i-buttercream, uma ithanda u-ayisikhilimu omnandi bese ilungile!
Shintshela kokunamathiselwe kwe-paddle bese uxuba phansi imizuzu eyi-15-20 ukwenza i-buttercream ibe bushelelezi kakhulu futhi ususe amagwebu omoya. Lokhu akudingeki kepha uma ufuna ukubanda okubandayo ngempela, awufuni ukweqa.
Ukukhonza:ezimbilioz|Amakholori:849kcal(42%)|Amakhabhohayidrethi:75g(25%)|Amaprotheni:ezimbilig(4%)|Amafutha:61g(94%)|Amafutha agcwalisiwe:38g(190%)|Cholesterol:162mg(54%)|I-Sodium:240mg(10%)|Potassium:18mg(1%)|Ushukela:74g(82%)|Uvithamini A:2055IU(41%)|I-calcium:18mg(amabili%)|Insimbi:0.4mg(amabili%)
abadlali abangu-20 abaphezulu ku-nba
abadlali abakhulu kakhulu eqenjini ngalinye le-nba
kuzoba nomthethosivivinywa wokubulala 3